Daalụ Trey Pennington | Martech Zone
Daalụ Trey Pennington
Sọnde, Septemba 4, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Shockingfọdụ na-awụ akpata oyi akụkọ a ụtụtụ, ịnụ ọnwụ na-atụghị anya ya Trey Pennington. Na Machị, Trey na Jay gwara m ka m nọrọ na ngosi redio ha, Meghee maka azụmahịa. Ọ bụ nnukwu mkparịta ụka banyere ịde blọgụ na-aga n'ihu na Trey n'ezie nyere m akara ngosi na ngosi ahụ niile. Ọ bụrụ na ị gụọ mgbidi Facebook ya, ị ga-ahụ na achọghị ọdịmma onwe onye nanị bụ ihe a na-ahụkarị n'ozi niile ndị na-eso ụzọ ya na ndị enyi ya hapụrụ.
Amaghị m nkọwa ọ bụla mana ọ dị ka Trey gburu onwe ya. Nke ahụ mere ka ọ bụrụ ihe ijuanya. Fọdụ n'ime netwọkụ Trey na-arịọ ndị mmadụ ka ha chọọ enyemaka ma ọ bụrụ na ha nwere echiche ọ bụla nke igbu onwe ha. M ga-agba nke ahụ ume.
Enwere nchegbu ọzọ na-akpata m. Trey dị na ntanetị dị ịtụnanya. Ọ na-agagharị ugboro ugboro ma na-arụ ọrụ na netwọk ya. Ibe akwukwo twitter ya bu ihe ndi mmadu na-agba ume, kelee ma bulie ndi ozo elu. Nchegbu m bụ na netwọk a dị egwu nke ndị mmadụ ezughị. Dịka anyị dị, anyị ka na-etolite mmadụ na ntanetị nke anaghị adaba na nsogbu anyị na-anọghị n'ịntanetị.
Ọnọdụ akụ na ụba na-amị ugbu a. Fọdụ ndị mmadụ na-ekwu ka eleghara ya anya ma na-aga n'ihu… mana m nwere ụfọdụ nsogbu dị egwu dịka onye nwe ụlọ ahịa. N'ime oge ebe ụlọ ọrụ m na-ahụ ka ihe ịga nke ọma, anyị ka na-enwe nsogbu. Kama itinye 100% maka ndị ahịa anyị, anyị na-achọta onwe anyị itinye 150% maka ha… na mgbe ụfọdụ nke ahụ ezughi - ihe a na-achọ na-aga n'ihu na-awụba. Ka anyị na-arụsi ọrụ ike na ndị ahịa anyị na-eto eto, ha nwere nsogbu na-emetụta ha cashflow… na nke ahụ bụ ihe na-emetụta ndị anyị mgbe niile.
Iji mmeri na ụlọ ọrụ a, ị ga-etolite. Iji tolite, ị ga-etinye onwe gị ma na-akwalite ibe gị. Ka netwọkụ gị na-abawanye, atụmanya na-eto kwa. Okwu ọ bụla i kwuru ga-aka nke ikpeazụ mma. Akwụkwọ ọ bụla ị dere ga-abụrịrị onye kacha ere ahịa. Ndenye blọgụ ọ bụla ga-aga malitere ịrịa. Oge obula mmadu kpọtụrụ gị, ị ga-akpọtụrụ ha na nloghachi… ma ọ bụ ihe ọzọ ị na-ahụta dịka onye ihu abụọ ma ọ bụ otu ụdị elitist. Nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị ọkachamara na-achọ n’ọrụ a karịrị akarị.
M na-agụkwu banyere ụfọdụ ndị isi nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta onwe ha na-egbu onwe ha, na-ewe ndị ọrụ iji tinye n'etiti ha na netwọkụ ha ma na-enyefe onwe ha arịrịọ na ọkwa nke enweghị. Ndị enyi m na-achị m ọchị n’ihi enweghị ike ịkpọ m ma ọ bụ jide m. Offọdụ ndị na-erughị nghọta ndị mmadụ na-ahapụ m nkụda mmụọ ozi, mgbe tweet m, mgbe ahụ kpọtụrụ m na Facebook… mgbe ahụ na-nnọọ were m iwe na m anaghị anabata.
N'izu a, ahapụrụ m ekwentị m na ịma jijiji na ọ na-ama jijiji na-enweghị nkwụsị na oku ọhụrụ na nkeji ole na ole ọ bụla. Emechara m gbanyụọ ya (dika m na-eme). Mgbe m na-arụ ọrụ na ngwụsị izu ọ bụla, ugbu a ana m ewepụta oge maka ndị enyi na ezinụlọ - n'agbanyeghị oke ọrụ ma ọ bụ ozi a na-azaghị. Enweghị m ike ijide na-azụ ahịa, na-arụ ọrụ ahụ, na-ere ahịa m NA-aza kwa arịrịọ ọ bụla sitere na netwọkụ m. Mgbe ọ bụla m chọrọ oge, nkwukọrịta na netwọk m ga-akụ afọ n'ala.
Anaghị m eme mkpesa. Nke a bụ ụwa m họọrọ ịnabata ma rụọ ọrụ n'ime, na ahụrụ m ya n'anya. M na-nnọọ na-arịọ ndị nke na-erite uru na-arụ ọrụ online ọkachamara na-eme na-ewe a nkeji, na-ekele ha… na-na-na-aghọta na anyị na-eme ihe kasị mma anyị nwere ike.
Trey Pennington nwere ugboro anọ ndị na-esonụ na m nwere. Enweghị m ike iche n'echiche ihe achọrọ ya. Anyị na-atụ anya inweta Trey na redio anyị n'oge na-adịghị anya maka ekele maka nkwado ya maka m… Ọ dị m nwute na anyị agaghị enweta ohere ahụ. Mana enwere m ekele maka Trey maka ohere o nyere m iji kparịta ụka na netwọkụ ya. Nke ahụ bụ ụdị nwoke ọ bụ. Enwere m ekele maka oge anyị na-anọ n'ịntanetị.
PunchTab: Nkwụghachi ụgwọ mmekọrịta ọha na eze na iguzosi ike n'ihe nye saịtị ọ bụla
2011 Social Media Uto
Sep 4, 2011 na 10:00 PM
Chilling. Ọ na-aza Tweets naanị 7 awa gara aga. N’ezie, debe ụkpụrụ anya nke ọma ma egbula oge ịchọ enyemaka mgbe achọrọ gị.
Sep 4, 2011 na 10:08 PM
E kwuru nke ọma, spragued.
Sep 4, 2011 na 10:25 PM
N'ihe na-erughị otu afọ gara aga, otu ezigbo enyi anyị hụrụ n'anya gburu onwe anyị n'ọgbakọ. Ọ bụ ihe ijuanya na otu ajụjụ ndị ahụ ị zitere na post gị bịara na anyị ga-ahazi oge ndụmọdụ na-eru uju iji dozie ajụjụ ndị dị mgbagwoju anya nke igbu onwe na ịda mbà n'obi. Amụtara m ọtụtụ ihe na ihe atụ a. Anụ nụ ọnwụ Trey Pennington gosipụtara mmetụta na ajụjụ na-egbu mgbu, na ugbu a enwere m udo karịa oge ọdịda gara aga.
Ihe ị na-eweta maka nrụgide na ihe ị chọrọ bụ n'ezie ezigbo isi okwu. Mkpụrụ obi mmadụ chọrọ izu ike ma ghara ịnagide oke ihe mgbu.
Echiche m na nkasi obi m na-aga nke ezi na ụlọ nke ndị ezi omume na ndị enyi nke Trey. Ka ihe nketa ya bụrụ ihe ngọzi mgbe niile ma ọ nwere ike ịchọta nkasi obi n'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Sep 5, 2011 na 4: 30 AM
Enwere m enyi ọzọ dị ka nke a afọ ole na ole gara aga ma ọ bụ oku na-ebili. O mekwara ka m chee echiche banyere ụbọchị ndị ahụ ma ọ nwere mmetụta ọ bụla na omume m. Ekwenyesiri m ike na ihe nketa Trey ga-emeri dị ka isi iyi sitere n'ike mmụọ nsọ. Mụ onwe m, na-ekpekwa ekpere maka ndị ezi-na-ụlọ ya na ndị enyi ya n’oge ọdachi a.
Sep 4, 2011 na 11:28 PM
M mụtara banyere Trey n'ụtụtụ a site na tweets si DC social media community. Ọ dị nnọọ mwute. Ọnwụ ya na-emesi ya ike na ndị mmadụ na-enwekarị ihe mgbu na-elegharakarị anya ha anya, ọ bụrụ na ọ na-atọ ndị ọzọ ụtọ mgbe niile, dịka ị na-egosi ebe a (na nke m gụrụ ebe ọzọ.) Ọ dị mfe ịkwado ndị ọzọ karịa ịrịọ maka enyemaka. Ọ bụ ụzọ dị mma (ma nwee isi!) Tozọ iji nwee mmetụta ma ọ bụ ọbụna iyi nke siri ike. Anyị bikwa na ụdị ọsọ ọsọ a na-anaghị enye anyị oge ma ọ bụ ike ọ bụla iji ruo, dịka anyị jikọtara.
Enwere m mmetụta maka ndị enyi ya na ndị ezinụlọ ya, na maka ya. Mmadu aghaghi inwe ihe mgbu a na-apụghị ichetụ n’echiche iji mee nhọrọ iji kwụsị ndụ ya. Enwere m olile anya na ndi ọzọ nọ n’ụdị nsogbu a g’eme ka ha ruo.
Sep 5, 2011 na 4: 34 AM
Ressionda mbà n’obi bụ ajọ onye ogbu ọchụ, Laurie. Ikwuru nke a banyere enyemaka. N'ezie, a sị m na mgbe ụfọdụ ọ theụ na-enyere ndị ọzọ aka na-enyere aka iwepụ iwe ndị ọzọ na-ata ahụhụ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụ okwu ndị a ma na-agba mgba, enwere m olileanya na ha ga-aga maka enyemaka. Onweghi ihe olileanya adịghị… anyị nwere ike ịnweta enyemaka ma anyị nwetakwa ọ joyụ ọzọ.
Sep 5, 2011 na 1: 47 AM
Akwa post Douglas. Enwere isi okwu 2 ị na-echegbu m:
1) "Dị ka transperent dị ka anyị bụ, anyị ka na-ịzụlite personas online na-adịghị mgbe niile dakọtara na anyị offline nsogbu." <= Ya mere ezi na ikpe dika ebubo. Ihe isi ike bụ na agbanyeghị na m na-eme nke a, echefuru m na ndị ọzọ nwere ike bụrụkwa. Ya mere, mgbe ị na-ele na Facebook ma ị hụ ọkwa ọkwa site na ndị enyi banyere ihe ịga nke ọma ha na-enwe, ihe niile 'na-atọ ụtọ' ha na-enwe, ọ na-eme m ka m nwee nkụda mmụọ na-agwụ ike ma na-agwụ ike, lol.
2) "Ndị enyi m na-egwu m ọchị n'ihi enweghị ike ịkpọ m ma ọ bụ jide m." <= Aghọtala m onwe m. Ọbụna mgbe a bịara n'ịza ajụjụ site na netwọkụ gị. Eziokwu bụ na ịgwa ndị enyi gị okwu ụbọchị ọrụ na ịza ajụjụ ụfọdụ, abụghị ọrụ na-eweta ego. Ma mgbe ọ ruru na ya, ị ga-echekwa oge gị na ee, were ndị nche ọnụ ụzọ ka ha rụọ ma chọpụta ọdịiche dị n'etiti ajụjụ ndị chọrọ nlebara anya gị na nke na-adịghị mkpa. Anọ m nwayọ nwayọ igbochi oku mbata na ọ dị ka ọ siri ike mana ọ bụ ihe m ga - eme, dị ka solopreneur iji bulie oge m wee weta anụ ezi.
Kpamkpam nwute ịnụ banyere Trey Pennington n'agbanyeghị. Amachaghị ọrụ ya. Site na tweets niile m na-agụ, ọ dị ka ọ bụ ezigbo mmadụ nke nyere nnukwu aka na mgbasa ozi mgbasa ozi na ụlọ ahịa ahịa.
Sep 5, 2011 na 4: 27 AM
Ndị ahụ bụ nnukwu ihe, Stephanie. Ọ na-eju m anya otu uru netwọkụ ndị a si baa uru oge ụfọdụ. 🙂 Obi dị m ụtọ na ị nọ m! Egbula oge iru eru mgbe ị chọrọ bulie m!
Sep 5, 2011 na 2:35 PM
A nnọọ obi na-obi na omiiko post na-agwa m okwu n'ezie. Dị ka onye malitere ụlọ ọrụ nke ya na-esochi mmefu nke onye m na-arụrụ ọrụ (na-ewu ụlọ) na onye na-ewebu ụlọ ọrụ mbụ, amaara m otu nrụgide ahụ.
M na mgba na onwe m ọtụtụ ugboro na-agbalị na-enye onwe m ihe ziri ezi na-ewere a ụbọchị pụọ; iji rụọ ọrụ na-erughị awa 13 kwa ụbọchị, iji kwụọ ụgwọ maka ihe 50th "n'efu" nke onye ahịa rịọrọ na iji bulie azụmahịa anyị. Anyị eto eto site na nlaazu ahụ ma nwee ọmarịcha ndị ahịa, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ihe achọrọ dị ka ị depụtara ha.
Douglas ọ bụ otu ezigbo enyi. Abụọ a oké ọbịa m nwere ya na afọ gara aga, ọ bụ ya mere obiọma na ọ bụ mbụ m na-ebi ndụ na agbasa ozi n'ikuku na-adị m ka m na-eti mkpu naanị ịnụ onwe m.
Ekwenyere m na ihe ndị mmadụ na-atụ anya ka ọ bụrụ na ọ ga-adabara gị.
Dị ka ndị na-ekwu na onye ịntanetị anyị na-adabaghị na ndị na-anọghị n'ịntanetị m ekwenyeghị. Trey bụ onye ahụ inye mmadụ n'onwe ya. Anyị dị ka ndị mmadụ / mmadụ adịghị njikere itinye ndụ anyị ọ bụla na ntanetị. Kedu ihe kpatara anyị ji bụrụ na ọ bụghị ahịa mmadụ.
Yabụ kedu ihe ị ga-achọ ka anyị kekọrịta na nkwukọrịta mmekọrịta anyị?
Ihe m họọrọ iwere na nke a bụ “Olee otu m ga-esi nọnyere ndị ọzọ n’ihi mmekọrịta mụ na Trey?”
Aga m anọgide na-abụ onye obi ụtọ na m ga-anọgide na-enwe ntụkwasị obi na netwọk naanị m maka oge m kwesịrị iwepụta.
Ihunanya m na ekpere m na abiara umu Trey dika m mara ho ihe ojoo di na mgbe nne na nna m gbara alukwaghim mgbe ha luru na abali iri-abuo na ise, m nwere ike iche n’echiche otu o si ewute mmadu igbu onwe ya n’ihi nkewa.
Sep 5, 2011 na 2:50 PM
Daalụ maka obiọma okwu, Michele. Ekwenyere m na achọghị m ka ndị mmadụ mara azụmaahịa m. N'aka nke ọzọ, agbanyeghị ndị na-eso ụzọ kwesịrị ịma mgbe ndị ha na-eso ụzọ nwere ọtụtụ nsogbu (ọhaneze na nkeonwe). Enweghị ihe dịka superman ma ọ bụ nwanyị, echekwara m na anyị kwesịrị ịlaghachi onye a zuru oke - ma ọ bụ na anyị niile na-agha ụgha onwe anyị maka 'nghọta', ọ bụghị ya?
Ndị enyi Trey na ndị ezinụlọ ya nọ n'ekpere m - lee ihe jọgburu onwe ya, nke jọgburu onwe ya.
Sep 5, 2011 na 7:35 PM
Nnukwu ebe Doug! M nwere ọtụtụ nke otu mgba. A na-agwa m mgbe niile na m kwesịrị ịmekwu ihe na ntanetị, mana m na-arụsi ọrụ ike ọtụtụ ụbọchị naanị na-eme onye ahịa m ọrụ. Gbalịa ka anyị nwere ike, ọ nweghị onye zuru oke ka ebe ị na-enwu n’otu ebe, ị nwere ike inwe ntụpọ na ndị ọzọ. Ọ dị mwute na ihe mere Trey. Ndụ ezinụlọ anyị dị ezigbo mkpa karịa netwọkụ anyị agbatị, mgbe ntọala ahụ na-ama jijiji ọ nwere ike ịdị nfe dịka ọ ga-ada. Ngọzi gị! Ana m ekele ndị ezinụlọ Trey nile na ndị enyi ya.